The akasununguka paIndaneti basa. Excavation, earthworks
Kukarukureta pamusoro dzokurwa kupikidura nokuda
Kukarukureta pamusoro dzokurwa
B - kupikidura udzamu
Y - gomba urefu
X - gomba upamhi
Construction earthworks - anochera gomba nheyo, pool kana dziva, mugoronga kuti zvionera nyika imba mapaipi, abudise hurongwa kana mvura yokurenda.
Pakuronga kupikidura zvemaBhaibheri vakachera ivhu zvakakosha chaizvo kuongorora zvakanaka.
Mari kupikidura inoumbwa kupikidura pakati mugoronga kana kupikidura uye kubviswa ivhu. Zvakakosha kuronga kufamba topsoil rukoko wenyika kushandiswa ramangwana mubindu mubindu kana miriwo. Kushaya mbereko chikamu ivhu inoshandiswa nokuputsa nzvimbo, Feedback magumbeze hwaro kana vanotorwa kure-nzvimbo. Places nokuti nokubviswa ivhu akatsunga pachine.
Kuonawo kuti mitengo 1 cubic mita rimwe kupikidura kazhinji kunowedzera ukuru basa. Sezvo mutengo pemvura kuti kudzika 1 mita uye 1 mita zvakadzama uye kungasiyana kunyange kaviri. Kufambira ivhu iri kazhinji yoga chinhu pamusoro zvekushandisa. Kuti varege varege chisingatarisirwi mari, anoratidza zvose pachine pamwe Muvaki.
Funga Muchengete ari chitsama kupikidura nokuda kugadzwa formwork apo kudira nheyo.
Manual kana Excavator?
Mumwe nomumwe Nzira idzi zvayakanakira avo uye nezvayakaipira.
Patinoedza manually gomba inogona kuitwa zvakanyatsorurama.
With rweruzhinji vechibharo uye uwandu yokupedzisira mari inoshandiswa noruoko kupikidura duku zvingava zvishoma pane apo kurenda imwe Excavator nezvimwe michina. Nyore kushandisa kuzvidzora kukura uye geometry mugomba.
Zvisinei, zvinokosha rakawanda ivhu uye pakukurumidza ane Excavator kazhinji rowana. Chero zvazvingava, kusarudza zviri kwauri.
Nzira yaJehovha earthworks.
First unofanira kutara nzvimbo mugomba kana mugoronga. Kuti vaite izvi, pamusoro pemvura pasi mbambo uye nhete tambo inoratidza nzvimbo basa. Kudzora geometry ari akayera diagonals maviri ramangwana mugomba - ravanofanira kuenzana.
Zvisinei, ichi chinhu unprofessional nzira uye yakakodzera chiratidzo pemigero kana nekaupenyu sandara nyika.
Nokuti rakanyatsorurama magadzirirwo earthworks vanoshandisa anotevera unyanzvi.
Pane chinhambwe kubva aronga kupikidura akachera yemapuranga mbiru, mumapoka maviri (castoffs). Ivo varibatanidze bhodhi yakatambarara, izvo dhonzai namabote. Mabhodhi, mapuranga kuti ndogadzirisa rimwe pamwero mumwe nomumwe.
Nokutamira namabote, kuzadzisa mhindu kupenda. Ava vakakanda-offs mukushandisa ramangwana uye chaiyoiyo ubvise nheyo formwork.
It hwezvekukurukurirana basa pamwero, Theodolite, Laser tepi chiyero kana Laser pamwero.
Ane simba munda kana zvikuru kudzama kupikidura kubhadhara ngwariro chaiyo kuchengeteka kupikidura. Panyaya iyi, rusvingo gomba vanoita kwaisava kutwasuka, asi ane rerekero - kudzivirira mukuteurwa ivhu.
Madziro uye pasi pegomba chechetere kuzvidzora uye njanji refu zvakakwana.
Nokuti necheparutivi yakarurama rworwendo 90 uriko womuchato. Triangle mativi 3:4:5 M (kana aine mativi dziri multiples pamusoro nenhamba idzi) munhu ane necheparutivi rworwendo 90. Akarara rimwe divi pakona 3 metres, rumwe - 4 uye daro pakati pfungwa kunge yakanyatsoenzana 5 mamita.